Waalidka masaafuriya caruurahooda oo wax laga qaban - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madaarka magaalada Stockholm ee Arlanda. sawir: Stina Stjernkvist/TT
Waalidka masaafuriya caruurahooda oo wax laga qaban
La daabacay måndag 8 januari kl 16.00
Intii u dhaxeeysay bilihii febraayo iyo september ee sannadkii hore oo koox-qarrameedka qaabilsan arrimaha la xidhiidha sharaf- dhowrka la soo wacay 46 jeer in ay jiraan caruuro khasab lagu dhoofiyay si loogu celiyo dalkoodii hooyo.
Dhowr heeyado ayaa dhaleecayn xoog leh loo soo gudbiyay madama ay la socdeen dhoofista caruurahan blase aaney wax ka qaban.
Mid ka mid ah kuwan ayaa ah Juno Blom oo ka howl-gasha hayad-goboleedka Östergötland. Waa gobolka ay dawladdu u xil-saartay in ay ka hor tagaan arrimaha la xidhiidha dembiyada sharaf dhawrka waxaa af-iswiidhishka lagu yidhaahdo hedersrelaterat våld.
-Halkii la badbaadin lahaa caruurahan ayaa waalidkii loo sheegayaa in caruurtoodi ay ashkateeyn ka gudbiseen. Taasi na waxeey sameeynaysa in waalidku si dhakhso leh caruurahooda dalkan uga masaafuriyaan, ayey sheegtay Juno Blom.
Laanta Ekot ayaa wareeysatay gabadh ay ku magacaabeen Sara. Sara waxeey ka mid tahay caruuraha ay waalidkood dalkan khasabka kaga kaxeeyeen si ay ugu celiyaan dalkoodi hooyo.
-Ballan kasta oo la iiga qaabto heeyada adeegga bulshada ee Socialtjänsten waxaa i raaci jiray waalidkeey. Markaa waxaad rabtid ma odhan kartid hadii waalidkii aad ashtakada ka gudbin laheeyd ku dul fadhiyo. Hadii aan keli ahaan lahaa waxaa aan filaya in aan fikirkeeyga rasmiga ah dhiiban lahaa, ayey sheegtay Sara.
Markii ay Sara noqotay da´da 16 jir ayey waalidkeed khasab ugu kaxeeyeen waddankeedii hooyo halka loo guuriyay nin da´diisu labalaab ku noqonayso ka Sara. Markii ay fursad heshay ayey iyada oo loo kaxeeynayo madaarka la soo hadashay heeyada adeegga bulshada.
-Markii telefanka la iga qabtay waxaa la igu yidhi in ay iyagu ila soo xidhidhi doonaan marka aan soo laabto, niyad jab ayaa igu dhacay, ayey tidhi.
Åsa Furen Thulin oo madax ka ah ururka ay ku mideysan yihiin degmooyinka iyo daryeelka caafimaadka dalkaan ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano SKL ayaa sheegtay in aqoonta degmooyinka ee la xidhiidha dembiyada sharaf-dhowrka sineeyn. Waxaa jira qaar ku fiican iyo qaar ku liita kiisaskan ayey u jeeda.
-Aqoon-kororsi ayaa looga baahan yahay dhinacan, ayey sheegtay.
Wasiirada sinaanta dalkan ee Åsa Regnér ayaa u aragta kiisaska sharaf-dhowrka wax waajib ku ah qof kasta oo heeyadahan ka shaqeeya.
-Waxaan ku jirna 2018:kii, aqoontani waa wax aan ka sugayo shaqaalaha heeyadahan ka hawlgala, ayey sheegtay.